Kismaayo News » Yuu noqon doonaa Ra’isul wasaaraha cusub ee Somalia (Faallo)By: Cumar dhicisaw
Yuu noqon doonaa Ra’isul wasaaraha cusub ee Somalia (Faallo)By: Cumar dhicisaw
Sida aan wada ogsoonahay tan iyo bisha bish September oo ahayd markii la doortay Madaxweynaha cusub ee Somalia Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa waxaa looga fadhiyaa inuu soo hordhigo Barlmaaan qaranka qofkii soo dhisi lahaa dawladdii ugu horeysay ee aan ahayn ku-meel-gaadh.
– Xildhibaan Xuseen Khalif
– Dr. Axmed Sh. Ali ( Doodijo)
– Faarax Cabdisamed (Afey)
– Saacid Garaad Shirdoon
– Nurudiin Diriye
Haddaan ku hormarno Xildhibaan Xuseen, waa sarkaal sare oo ka shaqeeya Bangiga Islaamka ee magaalada Jeddah ayna isku hayb hoose yihin Ra’iisal wasaare C/weli Gaas iyo Madaxweyne Cabdilahu Yusuf. Xuseen ayaa wax yar ka hor xilligii doorasha ka yimid shaqadiisa markii ugu horeysay ee uu siyaasadda soo galo marka laga reebo muddo gaaban oo dhalinyaranimadiisiii ka mid noqday Jabhaddii SSDF ee uu hoggaaminayay Cabdilahi Yusuf ee ku sugnayd dalka Ethiopia, ka dibna u tacabiray dalka ka Kanada oo uu ku noolaa intuusan shaqada uu hadda hayo uga soo wareegin.
– Inuu sarkaal sare ka yahay xarkada Dami jadiid oo aysan umaddu diyaar u ahayn xilligani
– Inuu ka mid yahay isla xisbiga talada haya oo aan isku heli karin inay ku wada fariistaan kuraasta ugu sareysa hoggaanka dalka.
– Sidoo kale xiriirka uu la leeyahay dawladaha iyo ururada Islaamiga ah oo colaad weyn u soo jeedi kara dawladda.
Haddaba doorka uu ku leeyahay xisbiga iyo xarakada diiniga ah ee ka danbaysa iyo weliba saaxiibtinimada dheer kala dhaxaysa Madaxweyne Xasan oo uu udub dhexaad u ahaa doorashadiisa ayaa dad badan magaciisa dhigi la’yihiin. Waxaase turunturo ku ah miisaanka hoose ee xilligan beeshiisa Mareexaan ay ku yeelan karto miisaanka siyaasadeed. Dad badan ayaa u arka in buunbuuninta Musharixiinta Mareexaanka ay ka hor keeni karayso tirada badan ee Daarood oo ayagu isku wada hayb gaar ah (Kablalax). Gaar ahaan Harti iyo Absame oo horey u wada watay Cabdiwel Gaas xulufo gaar ahna ku lahaa helista xilkani. Miisaanka ay ku leeyihiin Gobalada Puntland iyo Jubbooyinka ayaan ahayn mid aan la iska indhatiri karin oo aad muhim ugu ah taageerada madaxweynaha.
By: Cumar dhicisaw